संघीय सरकारलाई धुर्कोट गाउँपालिकाको पत्र: बाँदर कसरी नियन्त्रण गर्ने ? – पालिका समाचार
संघीय सरकारलाई धुर्कोट गाउँपालिकाको पत्र: बाँदर कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
मंगलबार, भाद्र ०१, २०७८ | १७:०३:०४ |
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–५ वस्तुकी पार्वता भण्डारीको घर नजिकै एक हलको बारी छ । खेतीमा रोग नलागे र जङ्गली जनावरले नोक्सान नगरे छ मुरी मकै उत्पादन हुन्छ । ५÷६ वर्षपहिलेसम्म साढे पाँचदेखि छ मुरीसम्म मकै भित्र्याएकी उहाँले यस वर्ष भने एक मुरी जति मकै स्याहार्नुभयो । कारण हो, बाँदरले मकै नोक्सानी गर्नु । “राम्रै फले त छ मुरीसम्म हुन्थे तर अहिले एक मुरी पनि पुग्न मुस्किल छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मुख्य बाली नै नोक्सानी भए पनि निराशा हुँदोरहेछ ।” उहाँको घरमा उहाँसँगै छोरा, बुहारी र छोरी छन् ।
बिहानदेखि बेलुकीसम्म चारैजना बारीमा बसेर बाँदर हेर्दासमेत मकै जोगाउन नसकिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । गत वैशाख ११ गते छरेको मकै भदौको अन्तिमतिर स्याहार्ने समय हो । बाँदर आतङ्कले गर्दा एक महिनाअगाडि गत साउनको अन्तिमतिर नै स्याहार्न बाध्य भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । वस्तुकै जितेन्द्र भण्डारीको पाँच रोपनी बारीमा आठदेखि १० मुरीसम्म मकै उत्पादन हुन्छ । मकै छरेपछि एकोहो¥याउने समयदेखि स्याहार्ने बेलासम्म लगातार बाँदर आइरह्यो । मकैमा दाना लागेदेखि बाँदरले बढी सताउन थाल्यो । अहिलेसम्म १८ देखि २० डोका अर्थात् चार मुरीभन्दा बढी मकै बाँदरले नोक्सान गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “एक पटकमा ९० देखि सयसम्म बाँदरको हूल आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीहरुको ड्युटी बाँदर धपाउने हो ।” उहाँले बाँदरले मकै नोक्सानी गरेपछि बाँकी रहेका मकै समयअगावै स्याहारेको र बाँदरबाट गाउँले नै हैरान भएको उहाँले बताउनुभयो । “बाँदर धपाउने बन्दुक दिगो समाधान होइन रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाँदरका अगाडि आत्मसमर्पण गरेजस्तै भयो ।”
उहाँले बाँदरकै कारण वस्तुमा अधिकांश जग्गा बाझिएको गुनासो गर्नुभयोे । बाँदरले वस्तुका झण्डै दुई तिहाइ कृषक हैरानी खेपेका छन् । त्यसका साथै जैसिथोक, रेसुङ्गा नगरपालिकाको चेक्मी, गुरुङगाउँ, मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुलगायत जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा बाँदरले सताउने गर्दछ । बाँदर नियन्त्रणका लागि गत वर्ष धुर्कोट गाउँपालिकाले २३ बाँदर धपाउने यन्त्र ल्याएको थियो । ठूलो आवाज निस्कने भएकाले केही बेर बाँदर भागे पनि फर्केर आउने समस्याले उक्त यन्त्र पनि प्रभावकारी नदेखिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले गाउँकार्यपालिकाले सङ्घीय सरकारलाई बाँदर नियन्त्रण गर्ने उपाय खोजी गर्न निर्णय नै गरेर पठाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख प्रभात सापकोटाले जिल्लामा बाँदर नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसका लागि अहिलेसम्म अपनाएका सबै उपाय दिगो नभएकाले कार्यालयले पनि ठोस कार्यक्रम नराखेको उहाँको भनाइ छ ।